China Yemazuva Ano Yakajeka Chena Oak ChiJapan Style Yakasanganiswa Kugara Kamuri Sofa Furniture # 0027 Kugadzira uye Fekitori | Yamazonhome
Yemazuva Ano Yakajeka Chena Oak ChiJapan Style Yakasanganiswa Kugara Kamuri Sofa Furniture # 0027
Muenzaniso nhamba: Amac-0027
Kukura: Chigaro chechipiri: 1370 * 750 * 840mm
Chigaro chimwe chete: 810 * 750 * 840mm
Zvigaro zvitatu: 1970 * 750 * 840mm
Nguva yechando uye zhizha mbiri-chinangwa sofa
Iyo furemu yakatengwa kunze chena oak, iyo yose bhodhi furemu, iyo chaiyo mbiri-chinangwa dhizaini yechando uye zhizha, zvakare yakagadzikana kugara pasina kiro, uye inotonhorera chikamu chiri pamaburi. Mitsara iri nyore uye inoyevedza, uye rutsigiro rwakanaka. Bhodhi rimwe nerimwe rehuni rakakwenenzverwa nemaoko uye hunyanzvi hwakajeka kuti uve nechokwadi chekuenderana. Iyo yepamusoro backrest inovimbisa yako nyaradzo uye kutandara, ichikupa iwe yakanakisa sofa chiitiko ....
Yakakwira kusimba kwesiponji pamushini
Yepamusoro-yekusimudza chipanji chemushonga, chakazadzwa nepamusoro-soro chipanji chemushonga, chigaro chekuvhara chivharo chakagadzirwa neganda-inoshamwaridzika donje nemachira machira, uye yakarapwa nekupfeka-kusagadzikana, pasina bhora, isina chakuvhuvhu, isina kupera, kukakavara uye kwete kunofambira mberi magetsi. Iyo sofa yekugara pakadzika yakaedzwa kakawanda, uye kukwirira kwakaringana kwakagadzirwa nesainzi. Kana vashanyi vauya mumba, backrest inogona kubviswa kuita mubhedha wenguva pfupi.
Yakasarudzika dhizaini yakakomberedzwa armrests
Iyo arc-yakaita chamfer yakabwinyiswa-ruoko kudzivirira kubhowa, kutsetseka kusvika pakubata, uye kwakabatana neiyo tenon-uye-mortise chimiro, icho chakasimba uye chakasimba. Iyo yakasimba huni furemu, huni yacho yakaoma, zvisinei kuti unosvetuka sei, iyo sofa haizununguke, inogona kutsigira ako ese mamiriro pasina kunetseka nezvekudonha. Iwo mawrestrests akakomberedzwa anotsigira zvakakwana maoko ako nemaoko, zvichikubvumidza iwe kuzorora chikamu chega chega zvakanaka.
Simbisa makumbo esofa
Kona yega yega yesofa furu yakakwenenzverwa kuve yakatenderera uye yakatsetseka, ichiita kuti igadzikane kusendamira, uye haizobate nhengo dzese dzemuviri. Makumbo esofa akagadzirwa nezvinhu zvakaomarara uye zvinorema kubata huremo hwakasimba. Pazasi pemakumbo emasofa haana kutsvedza uye anopfeka asingagone, ayo anodzivirira pasi rako uye anowedzera hupenyu hwesofa.
Inobvisika uye inosuka sofa zvigaro kumusoro
Inogoneka uye inowachika pasofa pekugara dhizaini, saka haufanire kunetseka nezve hutsanana. Hupenyu hunotipa iwo hunhu hwekudzikama uye kutandara, unoparadzira mufaro, uye mufaro nekusaziva unozadza imba nyowani.
Mhando dzakasiyana dzekufananidza mavara
Yakasarudzwa North America oak, zana-gore-rekare zvinhu, zvine yakakwira michini simba, yakajeka magadzirirwo, uye yakakwirira huni kukosha. Iwo mahombekombe makuru akaunganidzwa zvakananga, aine zvinhu zvakaomarara, zvine simba uye zvinogara.
Pashure: SUP paddle board color inoenderana inflatable surfboard ine zvimbi 0372
Zvadaro: Sterner Pet Metal Main Imba Diki Diki Mombe Yadeurwa Cage ine feeder 0244
Yakasununguka Sofa Mubhedha
Kaviri Recliner Sofa
Sofa Yemazuva Ano Set
Sofa Mubhedha Nekuchengetedza
Sofa Sachigaro Mubhedha
Kona yeIyo Hofisi Iyo Solid Wood Furu ...
Solid huni kicheni cabinet modular pantry kabhini ...